Potika ilay trano filanonana : andian-jatovo nifamono, iray maty voatsatoka antsy | NewsMada
Tovolahy iray, manodidina ny 27 taona eo ho eo no maty voatsatoka antsy, nandritra ny fifandonan’ny andian-jatovo, tao toeram-pisotroana iray, tao Sambava ny alahady alina teo.
Araka ny fantatra, mpamily Bajaj ity tovolahy ity, izay monina any an-toerana ihany. Niditra an-tsehatra ny zandary ka nosamborina ny lehilahy iray mpiambina tao amin’ilay trano filanonana io. Vokatr’izany, nirohotra teny amin’ny biraon’ny zandary ireo andian-tanora naman’ilay tovolahy maty rehefa naheno izany. Nitaky ny hamoahana ilay mpiambina hanaovana fitsaram-bahoaka ireo andiana tanora. Tsy nanaiky izany hatramin’ny farany ny zandary. Niaro ny birao sy ilay mpambina ny zandary satria tsy eken’ny lalàna rahateo ny famonoan’olona.
Tsy naharesy tosika, noho izany, ireo andian’olona teo ka nirohotra namotika ilay toeram-pilanonana indray avy eo. Tora-bato, famakiana tavoahangy sy fanimbana entana ny nataon’ireo andiana tanora tamin’izany. Niditra an-tsehatra mihitsy ny zandary vao niala teny izy ireo. Efa betsaka anefa ny zavatra simba. Nandray an-tanana ny fanadihadiana ny zandary, noho izany. Mbola ilay mpiambina ihany aloha ny olona voasambotra hatreto.
Sarotra ny mifehy fitsaram-bahoaka
Hatramin’izao, sarotra ho an’ny mpitandro filaminana ny mifehy ny fitsaram-bahoaka. Ny olona rahateo rehefa misy zava-mitranga, mahazo ity mirohotra mankeny amin’ny zandary ary mitaky fitsaram-bahoaka ity. Mety ho zava-doza anefa no aterak’izany satria hiteraka faty olona ary efa nitranga izany. Anjaran’ny manam-pahefana ny mampahafantatra ny olona fa fandikan-dalàna ny fitsaram-bahoaka, famonoan’olona, ny fanafihana biraon’ny manam-pahefana. Rehefa tsy misy io fampahafantarana, fampianarana, fanentanana io, indrindra ho an’ireo olona any amin’ny faritra, iverimberina hatrany ny fitsaram-bahoaka. Raha ny tany Sambava aloha, niverina amin’ny laoniny ny filaminana, mandeha ny fanadihadiana.